दलान नेपाल : मधेशमा ब्लायक आउट हुन्छ - राजेन्द्र महतो
‘जनताको छातीमा गोली हानेर संविधान दिवस मनाउने ? संविधान दिवस होइन जनताले ब्ल्याक आउट गर्छन्’, उनले भने, ‘जनताका अधिकार खोसेर कसरी हुन्छ संविधान दिवस।
सरकारले सांसद रेशम चौधरीलाई जेल हालेर बसेको छ। खोई त समानता, पहिचा र अधिकार ?’ हिमाल, पहाड, मधेसका सबैले अधिकार पाउनुपर्ने बताउँदै उनले सरकार नै संविधान असफल पार्नेतर्फ लागेको बताए । ‘संविधान असफल बनाउने काम सरकाले गर्नुहुँदैन। संविधानमाथि सरकारबाटै धेरै प्रहार भएको छ’, उनले भने, ‘संविधान संशोधनमा सरकारले किन दोहोरो चरित्र देखाउँदैछ ? तत्काल संविधान संशोधन हुनुपर्छ।’